ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 45.4 မွှေးလည်းမွှေးတယ် အေးလည်းအေးတယ်
nice post bro, go on ! we are supporting :)
Is it really? funny!
ဖွီး သောက်နေတဲ့ ကာဖီရေတွေ သီးပီးဖူးခနဲထွက်ကုန်လို့ မော်နီတာလဲ မော်ညိုတာဖြစ် ကီးဘုတ်လဲအကုန်ပေကုန်ပီ။
bro စာရေးတာတင် မဟုတ်ဘူး လူကပါ သော်တာဆွေနဲ့ တူလာသလိုပဲ။
သိပ်ရီရတယ်။ ဒီကိစ္စကို တစ်ယောက်ထဲလမ်းလျှောက်တဲ.အချိန်၊ ဈေးဝယ်ရင်းပစ္စည်းကြည့်တဲ. အချိန်၊ ရထားစီတဲ.အချိန်တွေမှာ သတိမရမိအောင်ကြိုးစားရမယ်။
Bro Nanda ပြောသလိုပဲ ဒီမှာအကုန်ထွက်ကုန်ပြီ...coffee သောက်နေတာကိုဒုက္ခပေးတယ်...ဟီး...တကယ်ရယ်ရပါတယ်...
အဟုတ်ကို အော်ရယ်နေပြီဗျို့ 